"Ny fanampiana ny orinasa no vahaolana" hoy ny filoha vaoavaon'ny Fivmpama - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
"Ny fanampiana ny orinasa no vahaolana" hoy ny filoha vaoavaon'ny Fivmpama
Notanterahana ny zoma 8 oktobra teny amin’ny PK 0 Soarano ny fivoriamben’ ny Fivondronan’ny Mpandraharaha Malagasy (Fivmpama), nanaovan’ny mpitondra teo aloha ny tatitra nandritra ny fitantanany ary koa nifidianana ireo mpitondra vaovao ho amin’ny 2021 ka hatramin’ny 2023.
« Mila tohizana ny fifampiresahana amin’ny fitondram-panjakana, ao anatin’ny fanaovana relance économique tokoa isika amin’izao fotoana izao » hoy Rivo Rakotondrasanjy filohan’ny Fivondronan’ny Mpandraharaha Malagasy (Fivmpama) vaovao. Nisy ny soso-kevitra efa nampitaina. Mila jerena sy ovaina kely ilay paika ady amin’ny fifampiresahana amin’ny mpitondra fanjakana mba hahazoana vokatra mivaingana. Nisy zavatra efa noresahan’ny Filoham-pirenena ombieny ombieny amin’ny lafiny indostria sy vidin-javatra. Izay no tena maika aloha amin’izao. Eo ihany koa ny fanafarana entana. Tsy ho afaka hanafatra entana foana isika, fa tsy maintsy hieritreritra ny hamokarana ireo entana ilaina eto amintsika, inona no tokony hatao hanosehana ny mpandraharaha malagasy hamatsiana ny tsena eto an-toerana. Ny aondrana no ilaina ampitomboana mba ahafahana miala amin’izao fahasahiranana sy fahantrana izao. Ny fanampiana ny orinasa no tokony hatao ho vahaolana amin’izao fahasahiranana misy eto amin’ny Firenena izao, na resaka hetra na famatsiam-bola, fanamorana amin’ny fividianana ireo akora sy ny fitaovana ilain’ny orinasa.
Tsy azo atao ny mampijanona ny fanafarana ny entana avy any ivelany amin’izao fotoana satria tsy ampy ny tolotra vita eto an-toerana. Tsy maintsy lanjalanjaina kosa anefa mba tsy hamono ireo orinasa efa misy eto an-toerana.
Betsaka ireo orinasa sahirana taorian’ny fihibohana iny, misy ary ireo nanakatom-baravarana mihitsy noho ny tsy fahafahana manohy ny asa fanao intsony. Tsy fahafahana mandoa ny karaman’ny mpiasa, mividy ireo zavatra ilaina amin’ny fanodinana ny orinasa. Mila jerena avokoa izany raha tiana ny hampandroso ny Firenena, indrindra amin’ny lafiny toe-karena. Lalina loatra ny fahasahiranana ka ilana ny fiarahan’ny rehetra mamaha ny olana. Mifamatotra hatrany ny mpitondra sy ny mpanjifa ary ny mpandraharaha ka tokony hiara-dalana hatrany.